Ohatra 20 amin'ny doka famoronana | Famoronana an-tserasera
Miaina anaty ady amin'ny fampahalalam-baovao isika, amin'ny daroka baomba tsy tapaka. Fantatrao ve fa mandray hafatra dokambarotra 3000 isan'andro izahay? Ny fanatanterahana elanelana eo amin'izy rehetra dia lasa asa sarotra tokoa na dia sarotra kokoa aza ny misarika ny sain'ny besinimaro. Misy ny fanentanana dokam-barotra izay mitaky fampiasam-bola an'arivony tapitrisa, misy dikany tonga lafatra izany, tsy dia mora loatra ny fanaparitahana hafatra manerantany. Tena ilaina ny vola hampivelarana atiny avo lenta, fa tsy tena ilaina. Matetika dia tsy izy irery no mamaritra ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra amin'ny dokambarotra, misy singa iray izay lasa lavitra kokoa ary tsy tokony hifanohitra amin'ny olana ara-bola.
Io singa io dia ny famoronana, izay ambonimbony kokoa amin'ny vola astronomia. Ny hevitra revolisionera dia azo averina amina ambaratonga lehibe nefa tsy mila mandoa habaka dokam-barotra manan-danja, fa iza no afaka mamorona hevitra matanjaka hanambarany ny tenany ho mpandresy eo amin'ireo mihoatra ny tapitrisa ny doka azontsika isan-taona? Indraindray dia ampy ny manova toerana an-tanàn-dehibe, mitondra ny teatra mankany amin'ny fijanonan'ny bus, mamerina ny vokatr'ilay meteorita eo afovoan'ny arabe ... Mbola tsy tonga ao an-tsainao ve izany? Eto ianao dia manana fitambarana tolo-kevitra fanaovana dokambarotra manaitra sy manaitra izay tsy mamela olona tsy hiraharaha. Manantena aho fa mankafy azy ireo ianao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ohatra 20 amin'ny doka famoronana